अदुवाको नियमति सेवनले शरीरलाई पुर्याउने १० फाइदाहरु यस्ता छन् ! « Pana Khabar
अदुवाको नियमति सेवनले शरीरलाई पुर्याउने १० फाइदाहरु यस्ता छन् !
समय : 12:29 am
अदुवा निकै स्वादिलो मसलाजन्य परिकार हो । यो जति स्वादिलो छ उत्तिकै गुणकारी तथा लाभदायी पनि हुन्छ । अदुवामा जिंगेरोल नामक तत्व हुन्छ जुन शक्तिशाली औषधीय गुणयुक्त तत्व हो । अदुवाको नियमति सेवनले विभिन्न खाले फाइदा पूराउँछ सरीरमा जुन यसप्रकार छन् :
-यसले रक्तप्रवाहलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग गर्दछ । अदुवामा क्रोमियम, म्याग्नेसियम तथा जिंक लवण पाइन्छ जसले रक्तप्रवाहलाई नियमित र सन्तुलित बनाउँदछ ।
– अदुवामा मधुमेह प्रतिरोधी गुण हुन्छ । अदुवाको नियमित सेवनले रगतमा सुगरको मात्रा नियन्त्रण गरिदिन्छ । साथै यसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि नियन्त्रण गर्दछ । जसका कारण मुटुरोगको जोखिम पनि कम हुन्छ ।
– विहानपख वाकवाकी लाग्ने समस्या भएकाहरुले अदुवाको सुठो चपाउनाले फाइदा गर्छ र उल्टी हुनबाट रोक्दछ । त्यसका साथै विभिन्न सर्जरी तथा क्यान्सरको केमोथेरापी गरेका विरामीमा आउने वाकवाकी तथा वान्ता रोक्न पनि अदुवा सहयोगी हुन्छ । अझ गर्भवती महिलालाई विहानपख आउने वाकवाकी नियन्णमा यो रामवाण नै सावित हुन्छ ।
– यदि तपाइँलाई चिसो तथा रुघाखोकीले सताउँछ भने अदुवा नियमित रुपमा खाने गर्नुहोस् । अदुवा पोलेर खानाले खोकीमा फाइदा गर्छ ।
– छाति तथा करंग दुख्ने समस्यामा पनि अदुवाको सेवन फाइदाजनक हुन्छ ।
– धेरै थकान तथा कमजोरी महसुस हुने समस्या भएकाहरुका लागि पनि अदुवाको सेवनले राहत प्रदान गर्दछ ।
-जिउको कुनै मांशपेशी दुखेको तथा सुन्निएको छ भने अदुवा त्यस्तो पीडा कम गर्न उपयोगी हुन्छ । यसलाई नियमित रुपमा चपाएर वा अन्य परिकारमा मिसाएर खानाले यसले मांशपेशीले दुखाइ विस्तारै कम गर्छ ।
– बाथरोगी तथा जोर्नी दुख्ने समस्या भएकाहरुका लागि समेत अदुवाको सेवन लाभदायी हुन्छ ।
– अपचको समस्या झेलिरहेका हरुका लागि पनि अदुवा निकै लाभदायी हुन्छ । अदुवाको धुलो नियमित रुपमा सेवन गर्नाले पाचन प्रक्रिया नियमित हुन्छ तथा राम्रोसँग दिसा हुन्छ ।
– अदुवाको नियमित सेवनले विभिन्न खाले संक्रमण जस्तै गिँजाको संक्रमण तथा स्वासनलीको संक्रमणको जोखिम पनि कम गरिदिन्छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ असोज २४,मंगलबार
नियमित सेक्स गर्दा यस्ता बिरामीको लागि फाइदै फाइदा
वीर्य बारे तपाईंलाई धेरै कुरा थाहा होला तर यी नौ कुरा थाहा नहुन सक्छ, हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने !
किन रुन्छन् मान्छे ?
सेक्सको उन्माद थेग्न नसन्नेहरु यस्ता पो हुन्छन् रे !
युवतीको अमानवीय तरिकाले योनी सिलाउनेदेखि स्तनमा आइरनसम्म गरिन्छ !
तातो पानी पिउनुका फाइदै फाइदा यस्तो छ
पूराना पार्टीलाई भोट हाल्नु अगाडि सोच्नै पर्ने दश कुराहरु
आज कार्तिक१ /अक्टोबर १८ को लागि राष्ट्रबैंकले तोकेको बिदेशी मुद्राको विनिमय दर
जिम्मा दिए राजदरबार हत्याकाण्डको रहस्य नेपाल प्रहरीले नै पत्ता लगाउन सक्छ
गृहमन्त्री हुन कांग्रेसभित्र हानथाप,गृहमन्त्री बन्ने गच्छदारको रहरमा विमलेन्द्र निधि तगारो
जस्तो सुकै दवाब आए पनि राष्ट्रघाती धमिराहरुलाई सिधाकुरामा ल्याएर नंग्याउने रविको प्रण
माँ मनकामना देवीले सबैको कल्याण गरुन, बुधबार कार्तिक १ /अक्टोबर १८को राशिफल
१९ बर्षका युवाले एकै बर्षमा कमाए २० लाख पाउण्ड,सबैभन्दा कम उमेरका करोडपति बने